Xirmooyinka Shirkadaha, Xirmooyinka, Shahaadooyinka Suuqa iyo Xirmooyinka Shirkadaha
Xirmooyinkaaga shirkaddu aad ayey muhiim ugu yihiin ganacsigaaga la isku daray. Haysashada nuquladaada asalka ah ama la xaqiijiyay ee isku-darka ama sameynta, oo ay la socdaan dukumiintiyo kale oo muhiim ah sida daqiiqadaha kulanka sanadlaha ah, wax-ka-beddelka, diiwaannada bangiga, shahaadooyinka saamiyada iyo foomamka IRS. Qalabkaaga shirkadda iyo buugga diiwaangelinta waxay abaabulaan dukumiintiyada sharciga iyo sharciga ee muhiimka ah ee shirkaddaada.
Xirmooyinka shirkaduhu waxay ku yimaadaan kiis qurux badan oo mugdi ah oo magaca shirkadaadu ku dheehan tahay dahabka lafdhabarta. Waxaa kujira Seals rasmi ah oo Shirkadeed oo leh magaca shirkadaada, gobolka iyo taariikhda ku biirista, Buugga Diiwaanada Shirkadaha, tusaalooyin qawaaniin ah, Daqiiqado Shirkadeed, Diiwaangelinta Agaasimayaasha iyo Liiska Saraakiisha, Diiwaanka Saamileyaasha, Diiwaangelinta Sirta, Saamiil Lahaanshaha Heshiisyada iyo dhowr shahaadooyin iibsi oo shaqsiyeed.
Si aad u dalbato Qalabka Shirkadaha, fadlan wac waaxda adeegga macaamiisha Mon-Fri inta u dhaxaysa 7: 00AM iyo 5: 00PM Waqtiga Pacific ee:
Ama waxaad u isticmaali kartaa soo gudbinta foomka dalabkeena halkan: Dalbo Shirkad leh Qalabka Shirkadda
Qalabka Jaangooska ah & Qalabka LLC - $ 99
Shirkadaha xirmooyinka aasaasiga ah ee shirkaduhu waxay ka samaysan yihiin tayo sare leh oo laba-to-to-meegaal ah oo vinyl ah oo lagu shaabadeeyey elektiroonig ahaan jiritaanka guddiga muddada dheer si loo bixiyo nolosha adeegga muddada dheer iyo cimri dheeri. Tayada ugu saraysa ee tayada leh ee lagu dhejiyay qaab-saddex-giraan ah oo leh laba furitaan iyo falal xidhitaan ayaa u oggolaanaya bogagga inay had iyo jeer jiifaan oo si fudud isu rogaan. Xarig kasta wuxuu ku faahfaahsan yahay dahab waxaana laga heli karaa midabada 5: burgundy, cagaar, buluug, madow iyo bunni iyo qaababka 3: Jaangooyooyinka caadiga ah, Slim Standard iyo Standard (Qalabka dhameystiran oo leh shaabadda & Shahaadooyinka)
Xirmooyinka Slim Corporate Standard - $ 99
Xirmooyinka Shirkadahaan ka kooban waxaa laga sameeyay vinyl labo-to tayo leh oo tayo sare leh. Iyaga iyo way ka jilicsan yihiin xirmooyinka caadiga ah. Qalabka tayada leh ee gadaal-dhagan oo leh saddex-giraan garaac leh oo leh laba furitaan iyo xiritaan xoojiyayaal ayaa u oggolaanaya boggaggu inay jiifaan oo u oggolaadaan inay si fudud u leexiyaan. Xarig kasta oo tayo leh wuxuu ku faahfaahsan yahay dahabka waxaana lagu heli karaa midabada 5: madow, bunni, buluug, cagaar, iyo burgundy.
Boodhadhka caadiga ah ama Xirmooyinka LLC - $ 99
Xiritaanka Velcro flap wuxuu hayn doonaa dukumiintiyadaada oo dhan. Xirmooyinkan waxaa loo dhisay qaab tayo sare leh oo ah vinyl laba-to-toted Textured. Aaladaha tayada sare ee gadaal-dhajiyay oo leh saddex-giraan-gacmeed oo leh laba furitaan iyo xoojiyayaal xirmooyin ayaa u oggolaanaya bogagga inay si jiif ah u fududaan oo si fudud u leexiyaan. Xarig kasta oo tayo leh wuxuu ku faahfaahsan yahay dahabka waxaana lagu heli karaa midabada 5: madow, bunni, buluug, cagaar, iyo burgundy.
Shirkadda loo yaqaan 'Linen Corporate' ama LLC Kit - $ 119
Weelasha gacmeedyada adag, ee culus culus waxay ka kooban yihiin maro wanaagsan, oo iyaga ka dhigaya kuwo soocan oo xarrago leh. Xarun kasta waxaa lagu dhisay qalab culus oo cimri dheeri ah iyo cimri dheer. Xarig kasta oo tayo leh ayaa lagu sharaxay dahabka waxaana lagu heli karaa midabada 3: madow, madow iyo burgundy iyo madow iyo cawlan. Xirmada Aasaasiga ah ee Shirkadda
Docu-Box Shirkad ama Xirmooyinka LLC - $ 119
Waxaa laga soo sameeyay heerka-ganacsiga, chikboard-ka culeyska culus ee culeyska, dhismahan qaaska ah ee naqshadeynta wuxuu bixiyaa difaac iyada oo aan loo baahnayn shandad gooni ah. Sanduuq kasta 'Docu-Box' waxaa laga heli karaa midabada 2: madow iyo burgundy. (Qalabka oo dhameystiran oo leh shaabad iyo shahaadooyin)
Zippered Portfolio Corporate ama Kitinka LLC - $ 130
Xirmooyinka shirkadani zippered waa xulasho qurxoon oo loogu talagalay kuwa raadinaya saldhig badeecadeed oo gundhig u ah. Cidhifyada sewn, xiritaanka zipper iyo geesaha biraha ah ayaa ka soo baxa dharkaan xulasho cajiib ah. Magaca ururka wuxuu ku xardhan yahay saxan naxaas ah oo loo yaqaan 'chrome steel steel plate'. (Qalabka oo dhameystiran oo leh shaabad & Shahaadooyin)
Blumberg Red Russia Shirkadaha Shirkadaha & Qalabka LLC - $ 485
Muuji fahamkaaga maalgashadayaasha, bankigaaga, CPA iyo qareennadaada. Waxaa loogu magac daray boogaha maqaarka cas ee quruxda badan ee loo yaqaan 'Red Russia' oo loo isticmaali jiray in lagu sameeyo, buuggan culus ee culus, ee buugga diiwaangelinta awoodda-sare ayaa ah xirmooyinka ugu wanaagsan ee shirkadda ay iibsan karto. Markaad dalbatid, waxaad ku tilmaami doontaa magaca shirkadda aad rabto ee ku saabsan shahaadooyinka, shaabadda iyo shaambadda gacanta shaabadaysan ee dahabka 24K ee laf dhabarta. Sidoo kale, caddee gobolka iyo sanadka shirkaddu abaabushay. Xirmadan ayaa la socota bog buuxa oo ah 20, shahaadooyin lambarro leh oo leh boggag dhammaystiran oo daabacan oo leh magaca shirkadda, gobolka, cinwaannada saxiixa iyo cinwaanka guud. Waad dalban kartaa shahaadooyin dheeri ah hadba sida loogu baahdo. Shirkadaha ama LLCyada. Wuxuu la imanayaa daqiiqado shirkado daabacan iyo xeerar. (Qalabka oo dhameystiran oo leh shaabad & Shahaadooyin)